डिभी परेन ? चिन्ता नलिनुस् अमेरिकाको ग्रीनकार्ड पाउने अर्को छ यस्तो उपाय - Nepal Insider
Home/समाचार/डिभी परेन ? चिन्ता नलिनुस् अमेरिकाको ग्रीनकार्ड पाउने अर्को छ यस्तो उपाय
काठमाडौं । नेपालीहरुले अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र अर्थात् ग्रीनकार्ड पाउने सजिलो माध्यम हो– डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठा अर्थात् डीभी लोटरी कार्यक्रम । डीभी कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरु अमेरिका पुगी ग्रीनकार्ड पाउने गरेका छन् । तर, ग्रीनकार्ड पाउने त्यो मात्र एक माध्यम होइन । अमेरिकाको भिसा कार्यक्रम अनुसार धेरै पैसा छ भने अमेरिकामा लगानी गरेर त्यहाँको ग्रीनकार्ड सजिलै पाउन सकिन्छ । आखिर कसरी पाउने त यस्तो ग्रीनकार्ड ?
अमेरिकाको ईबी–५ नामक भिसा कार्यक्रम अनुसार आप्रवासी लगानीकर्तालाई ग्रीनकार्ड पाउने बाटो खुल्ला हुन्छ । सामान्यतः अमेरिकामा करिब १० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरी १० जनालाई रोजगारी दिनसक्ने आप्रवासीको लगानीलाई मध्यनजर गरी ग्रीनकार्ड दिइन्छ । तर, अमेरिकामा अधिक बेरोजगारी रहेको क्षेत्रमा भने केबल ५ लाख अमेरिकी डलर मात्र लगानी गरेपनि ग्रीनकार्ड पाइन्छ ।
हालै अमेरिकाको नागरिकता तथा अध्यागमन निकायले परिवर्तन गरेको नियमअनुसार आगामी नोभेम्बर २१ बाट भने यो नियम परिवर्तन हुँदैछ । नोभेम्बर २१ बाट भने सामान्यतः १८ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिक बेरोगगार दर भएका क्षेत्रमा ९ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान शुरु हुन लागेको हो ।
ज्ञानेन्द्र शाहीको अवस्था नाजुक बन्दै, बोल्न समेत नसक्ने भए- भिडियो
प्रचण्डकै गृहजिल्लामा नेकपाको लज्जास्पद हार ? यसरी अगाडि बढ्दैछ कांग्रेस